> Resource> iPod> Stream Music ka iPod si PC
-Ewute ịchọta niile ochie songs na gị iPod na-dochie anya ndị ọhụrụ? Ọ bụrụ na ee, ị ga-abịa nri ebe. Isiokwu a na-aga na-ewebata a ọkachamara iPod music transfer ngwá ọrụ aha ya bụ Wondershare TunesGo (n'ihi na Windows ọrụ). Na nke a iPod music transfer ngwá ọrụ, ị nwere ohere ka enuba music ka iPod si PC enweghị adịkwa ọ bụla ochie song. Ọ nwere ike tọghata music ka MP3, ime ka ị na-enweta songs na kedi formats.
Ịbụ a Mac onye ọrụ, ị nwere ike na-atụgharị nke Mac mbipute a ngwá ọrụ - Wondershare TunesGo (Mac). Ọ na-enye gị ohere iji enuba music gị iPod si Mac mfe.
Download a iPod music transfer ngwá ọrụ na-agbalị nkwanye music ka iPod.
Cheta na: The Windows version - Wondershare TunesGo bụ dakọtara na iPod ụdị, gụnyere iPod aka, iPod ịkpọgharịa na iPod nano. Biko ego dum na-akwado iPod ụdị na iOS.
Olee otú enuba music ka iPod si PC
Ma nsụgharị ịrụ yiri nke ahụ. Ebe a, na-ahapụ 'na-agbalị Windows version. Wụnye nri version na PC gị. Ẹkedori ya na-egosi njikọ window.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPod ka PC na iji eriri USB
Iji malite, jikọọ gị iPod ọ bụla PC gị na iPod si eriri USB. Ozugbo gị iPod jikọọ, nke a iPod music transfer ngwá ọrụ ga-chọpụta ya na mgbe na-egosipụta ya ke akpan window.
Nzọụkwụ 2. Stream iPod music si PC
Na-ekpe sidebar, pịa "Media". Pịa "Music" n'elu mmanya iji bugote music window. Site na ịpị "Tinye", ị ga-faịlụ nchọgharị window. Agagharị gị PC ịchọta songs ị chọrọ enubakwa n'ime ya. Iyi ha gị iPod.
Mgbe nke a iPod music transfer ngwá ọrụ na-achọpụta rụọ na songs na-apụghị-egwuri na gị iPod, ọ ga-echetara gị na tọghata iPod enyi na enyi songs.
Ọ bụrụ na i kere ụfọdụ listi ọkpụkpọ na iTunes n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ na PC gị, nwere ike na-enuba ha gị iPod kwa.
-Abịa azụ ekpe sidebar, pịa "Playlist" na-playlist window ke ziri ezi. Pịa triangle n'okpuru "Tinye". Mgbe ahụ, ị ​​nhọrọ abụọ: "Tinye listi ọkpụkpọ site na Computer" na "Tinye iTunes Ndetuta egwu ọkpụkpọ".
Site na ịpị "Tinye listi ọkpụkpọ site na Computer", ị ga-esi faịlụ nchọgharị window. Ịnyagharịa ebe ị ịzọpụta listi ọkpụkpọ na-enuba ha.
Cheta na: The Mac mbipute a ngwá ọrụ anaghị akwado importing iTunes listi ọkpụkpọ gị iPod. Ọ na-ahapụ gị tinye listi ọkpụkpọ gị iPod, ma ọ dịghị egosi na playlist ka Windows version na-eme.
Ọ bụrụ na ị chọrọ enuba iTunes listi ọkpụkpọ gị iPod, pịa "Tinye iTunes Ndetuta egwu ọkpụkpọ". Na mmapụta esiri-ala menu, nanị ego gị chọrọ listi ọkpụkpọ. Pịa "OK". Mgbe ahụ, nke a iPod music transfer ngwá ọrụ na-amalite strimụ o egwu na music Ama, dị ka fim, skips na play akaụntụ.
Gbalịa TunesGo iji strimụ music on iPod!